I-Archipelago Hideaway-I-Oasis eLwandle ene-Spa - I-Airbnb
I-Archipelago Hideaway-I-Oasis eLwandle ene-Spa
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJuliet
Ngokwenyani yaseScandinavia ehonjiswe ikhabhathi eyenziwe ngamaplanga iseti imitha e-1 ukusuka kulwandle lweBaltic, ikunika iimbono zolwandle eziphefumlayo.
Kuphela i-1.5h ngesikhephe esisuka e-Sthlm C okanye i-50m ngemoto + 6m ngesikhephe esisuka kumhlaba omkhulu, kodwa sithe cwaka sikwindalo, le ndawo ingasese yindawo yokubuyela ezidolophini njengenye.
Ikhabhinethi ibonelela ngokusondeleyo, ilula kwaye iphumla yokurhoxa kubantu aba-2. Lala uva isandi samaza. Grill marshmallows ngaselwandle. Bukela iinkwenkwezi kwi-jacuzzi ngomrhumo (nceda ucele ukubhukisha).
Ikhabhinethi inendalo yaseScandinavia - izolile, i-chic kwaye ipholile.
Ifumaneka kwisiqithi kwaye ikwimitha eyi-1 ukusuka elwandle ngaphakathi kweStockholm's Archipelago, ikhabhathi lilitye elifihliweyo. Yintoni enye engcono kunokuba ndilale ukuya isandi ngamaza nokuvuka ukuba ndijonge imboniselo ulwandle weentaka abadlula yonke imihla unyaka wonke - wonke ngaphakathi umgca wokuweza ngqo iiyure 1.5 ukusuka Stockholm Centre okanye imizuzu 6 ngeenqanawa nezwekazi ?
Igumbi lokuhlala / lokutyela lizaliswe yimpahla yaseScandinavia, imihombiso yakudala kunye nehombiso eyenziwe ngesandla kubandakanya ivili lokuqhuba isikhephe seminyaka engama-70, oonokrwece baselwandle, iitafile ezenziwe ngezandla kunye namakhandlela kuzo zonke iikona. I-sofa ijika ibe yibhedi ye-160cm kwaye ngaphesheya kwegumbi yindawo yokutyela enetafile kunye neebhentshi ezi-2 ezenziwe ngezandla kunye neefestile ezinombono wolwandle. Ikhitshi elincinci lidityaniswe kwindawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala kwaye inayo yonke into oyifunayo ukwenza ukutya okumnandi, i-oven, isitovu, i-microwave, ifriji, i-sink njl. I-wifi ekhawulezayo kunye neprojektha encinci kwigumbi lokuhlala eliqhagamshelwe kwiChromecast eneNetflix kunye nezithethi eziqhagamshelwe kwiKhaya likaGoogle.
Igumbi lokulala lincinci kwaye likhululekile ngobukhulu kunye nebhedi ye-120cm kunye nee-hangers.
I-terrace ijikeleze i-cabin, icala lasekhohlo kunye netafile yangaphandle kunye nezihlalo ezinolwandle ngokuthe ngqo phantsi kwakho kwelinye icala kunye namadlelo e-blueberry kwelinye. Ilanga litshona kweli cala ukuze lilungele isidlo sangokuhlwa / iwayini xa imozulu ivuma. Kukwakho nendawo yokuphumla etofotofo. Ishawari yangaphandle ilapha kunye namanzi ashushu ahambayo; ishawari enembonakalo entle kakhulu. Icala lasekunene le-terrace linophahla, kukho izitulo ezibini apha zekomityi yeti ngaphandle kwemini yemvula kunye ne-BBQ encinci yokufumana isidlo sakusihlwa.
Indlu yangasese yangaphandle yindlu yangasese yokutshisa kwaye ilele ecaleni kwalapha kwigumbi layo elincinane elenziwe ngamaplanga, elinezibane ezikhanyayo kunye nesixhobo sokufudumeza esincinci esivuleka zombini xa uvula ucango.
Idokhi yakho yabucala iphambi kwendlu, apho ungayi kubona nto ngaphandle kwamanzi, iziqithi ezikude kunye nezikhephe ezahlukeneyo / amadada / amatywina adlulayo. Mna / iindwendwe zikhe ndazibona izibane zaseMantla ukusuka apha, ngexesha le-prime Northern Lights, nangona ingumbono onqabileyo ukuba ulapha xa ubonisa ukuba awunakuba kwindawo enomlingo ngakumbi kweso sihlandlo.
Iimitha ezimbalwa ukusuka kwikhabhinethi ngumlilo ovuthayo kumatye agudileyo eziimitha ezi-2 ukusuka elwandle, oko kuyenza ibe yeyona nto ifanelekileyo yangokuhlwa yokujonga iinkwenkwezi okanye igrill marshmallows. Amaqunube kunye neeapile zikwindawo okhululekileyo ukuyikhetha ngexesha lonyaka.
Iimitha ezingama-50 ukusuka kwikhabhathi yenye idokhi enejacuzzi apho unokubhukisha khona umrhumo unyaka wonke (nceda ucele kubhukisho lwakho ukuba loluphi usuku/amaxesha okubona ukufumaneka kwawo). Yonwabela izinto ngexesha lasemini phantsi kweedigri ezingama-40 ngolwandle oluvulekileyo kuphela phambi kwakho, okanye ubukele iinkwenkwezi ngelixa urhabula amaqamza.
4.99 · Izimvo eziyi-100
Isiqithi saseVårholma sinobude obuyi-3km kunye ne-1km ububanzi, oko kuyenza ibe yisayizi efanelekileyo yokuhamba okuncinci kukubonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zendalo kunye neentlobo ezahlukeneyo zezindlu zangasese. Kwesi siqithi kukho iidokhi ezintathu zezikhephe, indawo yokuqubha eqhelekileyo kunye nomboniso womdaniso osetyenziselwa iMidsummers Eve. Ngexesha lasebusika kuqhelekile ukuba ungaboni nakuphi na abemi kwesi siqithi phakathi evekini, kwaye abanye ngeempelaveki, nto leyo ekubonelela ngoxolo noxolo.
Amakhowa kunye namaqunube aluhlaza akhula endle kwesi siqithi. Amaxhama ahlala ebonwa kufutshane nendlwana, kwipropathi nakwindawo ejikeleze isiqithi. Amatywina angabonwa ngamaxesha athile kwitafile yokutyela, ekhupha intloko esuka elwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Juliet
Mna nomyeni wam, nosana lwam sihlala eStockholm kodwa ndiza kufumaneka kwa-Airbnb, kuWhatsapp okanye kumnxeba oqhelekileyo ngalo lonke ixesha. Kuphela ngamaxesha athile, siya kuba kwenye indlwana yam. Uya kuba nemfihlo epheleleyo, kwaye ndiya kufumaneka ngalo lonke ixesha ukuba kukho nantoni na.
Mna nomyeni wam, nosana lwam sihlala eStockholm kodwa ndiza kufumaneka kwa-Airbnb, kuWhatsapp okanye kumnxeba oqhelekileyo ngalo lonke ixesha. Kuphela ngamaxesha athile, siya kuba…
Iilwimi: English, Norsk, Español, Svenska